Tilmaamaha Magazine ee hadda Isbaanish - Geofumadas
Tilmaamaha Magazine ee hadda ku qoran Isbaanish
Febraayo, 2009 Geospatial - GIS, tabo cusub, Internet iyo Blogs
Waxaan si aad ah ugu soo dhoweyneynaa warka ah in Muuqaalada Tilmaamaha ay bilaabeen qaabka luuqada Isbaanishka ee Directionsmag.es laga bilaabo 2 bishii Febraayo. Shaki la'aan, tani waxay ka dhigan tahay tallaabo muhiim ah iyo aqoonsi ah heerka koritaanka ee dhul-beereedka uu ku lahaa adduunka ku hadla afka Isbaanishka.
Qaar ka mid ah waxyaabaha ku jira turjumaadda Ingiriisi / version Faransiiska laakiin sidoo kale waxay bixiyaan wax u gaar ah ee la xiriira suuqa tegotecnologías ee Spain iyo Latin America. Sida ku dhawaaqay in war-saxaafadeed ka, ay diirada ku saabsan qaybaha kala duwan ee warshadaha iyo teknoolajiyada geospatial sida GIS, adeegyada goobta, khariidaynta, CAD, Satlaytaka fog, adeegyada Web, Business Intelligence (bi) iyo codsiyada la xiriira iyaga.
Maaraynta maamulka ee bogga Isbaanishka ayaa mas'uul ka ah Alberto Santos, iyo sida wada-hawlgalayaasha istiraatiijiyadeed wax ka yar:
Gabriel Ortiz, laga bilaabo Dawladda Cantabria oo si fiican loogu yaqaan bogga shabakaddeeda Gabrielortiz.com.
Alvaro de Gracia, ee Intego Iberia
Juan Marín Otero, ee New Technologies
Oscar Alberto Díaz Bocanegra, by GTT NetCorp Latin America
Ciise of Diego, ee Nidaamka ACT iyo Jaamacadda furan ee Catalonia
Mid ka mid ah novelties xiiso leh, ka duwan nooca Ingiriisiga waa qaybta blogs, halkaas oo ay ku meeleeyay references hadda:
Intaa waxaa dheer in ay jirto qolka liiska shaqooyinka, dhacdooyinka iyo articles xitaa soo bandhiga kuwa jeclaan geofumar farahaaga 105. Sidaas awgeed, waxaan soo dhawaynaynaa this portal cusub baahin si ay u muujiyaan waxa ay ku jiraan qaar ka mid ah waxyaabaha ugu horeeya:
Mustaqbalka GIS: Wabiga soo galaya
gvSIG, horumarinta iyo furayaasha GIS bilaash ah oo ku saabsan habka mawduucyada
Wareysi la leh Bernardo Hernández, oo ah agaasimaha caalamiga ah ee Google Geomarketing
blog Google Earth GvSIG OS majallado egeomates My
Post Previous«Previous Sida loo isticmaalo sawirada taariikheed ee Google Earth
Post Next Horumarinta Yar ee Qalabixinta CAD - QiimahaNext »
2 Jawaab in "Directions Magazine hadda ee Isbanish"
jrwn1687 isagu wuxuu leeyahay:
Hambalyo, waad ku mahadsan tahay wadaagista!
Hambalyo loogu talagalay in lagu daro boggaaga boggaan ...
Waa maxay warka wanaagsan!
Aniga ahaan, inaan u tarjuno Google Earth Blog af Isbaanish, xitaa mas'uuliyad dheeri ah… Waxaan rajeynayaa akhristayaasha Isbaanishka ee DM inay yaqaanaan sida loo cudurdaarto "Argentineism", haddii aysan wali ka cabsi qabin GEB ..